Hamro Yatra | » रघुजी पन्तको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना, के भनेका थिए कोमल वलीलाई ? रघुजी पन्तको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना, के भनेका थिए कोमल वलीलाई ? – Hamro Yatra
> रघुजी पन्तको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना, के भनेका थिए कोमल वलीलाई ?
रघुजी पन्तको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना, के भनेका थिए कोमल वलीलाई ?
१६ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा_ प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले कोमल वलीका बारेमा गरेको टिप्पणी विवादमा परेको छ । शनिबारको कार्यक्रममा कोमल वली नेकपाको राष्ट्रिय सभा सांसद र केन्द्रीय सदस्य बनेको विषयमा पन्तले गरेको टिप्पणीको सामाजिक संजाल र मिडियामा आलोचना भएको छ ।
नेता पन्तले २०औं वर्ष ज्यानै दिएर पार्टीमा लागेका महिलाहरुले टिकट नपाएको तर केपी ओलीले कोमल वलीले यसो सारी सरक्क सर्काएर गोरा पिंडुला देखाउँदै ‘पोइल जान पाँउ’ भनेपछि सांसद बनाएको र केन्द्रीय सदस्य बनाएको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘अहिले महिलाहरु पनि केपीतिर पनि लागेका छन् । २० औं वर्ष ज्यानै दिएर यो पार्टीमा लागेका महिलाहरु पनि छन् । तर, तिनले टिकट पनि पाएनन् । तिनले राष्ट्रियसभा पनि पाएनन् । केपी ओलीले कोमल वलीले यसो सारी सरक्क सर्काएर गोरा पिंडुला देखाउँदै ‘पोइल जान पाँउ’ भनेपछि सांसद त तिनैले पाइन् । कपाल फुलेर चाउरी परेका बुढी कमरेडहरु न राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन पाएका छन् न केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन पाएका छन् । उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि भइन् केन्द्रीय कमिटी सदस्य भइन् ।’
पन्तको अभिव्यक्ति बारे आलोचना भइरहेका बेला कोमल वलीले पनि सामाजिक संजालबाट टिप्पणी गर्दै पन्तको अभिव्यक्तिले आफ्नै आफ्नो आमा दिदीबहिनी सबैलाई अपमान गरेको बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘ पुर्वीया दर्शनदेखि मानव विकासमा महिलाको उच्च सम्मान समाजको कसिमा उत्तीर्ण भएर भएको छ । प्रकृतिले नै महिला र पुरुषको समायोजन गरेको हो । एकअर्काको आदर सम्मान विना समाजमा न्याय समानता र विवेकशीलताको अन्त हुन्छ । समाज हिंसा तिर जान्छ र दया करुणा जस्ता कुरा हराउँछन् । तसर्थ एकले अर्कालाइ सम्मान गर्नु जीवनलाई मर्यादित र सरल बनाउनु हो । तर नेकपाका नेता रघु पन्तले महिलाहरुले प्राप्त गर्ने पदहरु पिंडुला देखाएर भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ वहाँको मानव बिकासका क्रममा बन्ने तन्तुहरु विचैमा रोकिएको जस्तो छ । वहाँले प्रयोग गर्ने शव्दहरुले आफ्नो आमा दिदीबहिनी सबैलाई अपमान गरेको छ । विवेकहिन मानिसको आलोचनाले आफैलाई आलोचित गर्दछ यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टी र समाजको दुर्घटना कति टाढा होला ?’
त्यस्तै वलीले ट्वीटरमा आफैले नेता मानेका पन्त कति निच हुनुहुदोरहेछ भन्दै टिप्पणी गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘ हामीले नेता मानेका रघुजी पन्त कति निच हुनुहुँदोरहेछ भन्ने बल्ल खुलेको छ । पंतजीलाई मेरो प्रश्न, तपाईको पार्टीमा कुनै पदमा रहनुभएका महिला नेतृहरुले को कसलाई पिंडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्नुभएको हो ? के यो देशमा महिला कुनै पदमा पुग्न तपाईको जस्तो दरिद्रसोचको सिकार हुनुपर्छ ।’